Ireo tanàna 10 any Eropa misy fari-piainana avo lenta | Vaovao momba ny dia
Ireo tanàna 10 any Eropa manana fari-piainana avo lenta
Carmen Guillen | | tanàna, Copenhague, Fialantsasatra any Eropa, Hamburg, Malaga, Munich, Oslo, Zurich
Fantatrao ve hoe iza ireo tanàna 10 any Eropa manana kalitaona avo lenta? Mihevitra ve ianao fa misy tanàna espaniola eo amin'izy ireo? Inona avy ireo tanàna azonao antoka fa ho ao amin'ity lisitra ity? Raha tsy manana valiny amin'ireo fanontaniana rehetra ireo ianao dia eto dia atolotray azy ireo ... Jereo hoe inona ireo tanàn-dehibe mety any Eropa tsy hitsidihana fotsiny fa hijanona ...
1 Toerana # 1: Oslo, any Norvezy
2 Toerana # 2: Zurich (Suisse)
3 Toerana # 3: Aalborg (Danemarka)
4 No. 4: Vilnius (Litoania)
5 Toerana # 5: Belfast (Irlandy Avaratra)
6 No. 6: Hamburg (Alemana)
7 Toerana # 7: Rostock (Alemana)
8 No. 8: Copenhagen (Danemark)
9 Toerana faha 9: Malaga (Espana)
10 Toerana faha-10: Munich (Alemana)
Toerana # 1: Oslo, any Norvezy
Miaraka ihany 647.676 XNUMX ny mponina, Oslo any Norvezy, no laharana voalohany amin'ny 1 amin'ity ambony ny tanàna eropeana izay toerana ipetrahany tsara indrindra.
Raha miavaka amin'ny zavatra iray i Norvezy, ary vokatr'izany ny tanànan'i Oslo, dia noho ny niorenany iray amin'ireo rafi-pampianarana tsara indrindra eran'izao tontolo izao.
Raha ny zava-misy mahaliana momba an'i Oslo dia manana fifanarahana kambana marobe amin'ireo tanàna samihafa any Eropa izy, anisan'izany ireo Espaniola roa: Alfaz del Pi (Alicante) sy Mazarrón (Murcia).
Toerana # 2: Zurich (Suisse)
Raha zavatra iray no fantatsika momba ny tanànan'i Zurich, dia io no ivontoerana ara-bola sy motera toekarena any Suisse rehetra. Heverinay, araka izany, fa ny ampahany lehibe amin'ny lesoka izay tanàna mety hivelomana dia ny fahombiazany ara-toekarena tsara ... Antony iray hafa mahatonga ny fahombiazana ara-toekaren'i Zurich ny sehatry ny fikarohana sy fanabeazana avy amin'ny tanàna. ny Sekolin'ny politikan'ny federaly any Zurich (Ita) mitarika an'io lafiny io miaraka amin'ny University of Zurich. Tanàna iray hafa manana rafitra fanabeazana efa napetraka, noho izany ...
Ny fahalalam-pomba ve no tsiambaratelo amin'ny zava-drehetra? Aleoko manao izany!
Toerana # 3: Aalborg (Danemarka)
Aalborg no tanàna fahefatra lehibe indrindra any Danemark, aorian'ny Copenhagen, Aarhus ary Odense. Tanàna misy an'i seranan-tsambo, ary miaraka amina toby lehibe iray an'ny Air Force Danoa. Io koa no toeran'ny eveka loterana.
Na dia tanàna faha-4 lehibe indrindra any Danemark aza izy io dia tsy manana mponina marobe, satria tsy mihoatra ny 200.000 ny mponina.
kaonty miaraka amin'ireo orinasa 9.200 109.000 mampiasa olona manodidina ny XNUMX, mihoatra ny antsasaky ny mponina. Ary mivelona indrindra amin'ny indostria sy ny fanondranana voamadinika, simenitra ary toaka izany.
Iray amin'ireo antoko manamarika azy ny ny Karnavaly. izay ankalazaina eo anelanelan'ny 27 sy 28 Mey. Manodidina ireo daty ireo no ahazoan'ny Aalborg olona maherin'ny 20.000 XNUMX izay mandeha mankamin'ny tanàna hankafy ilay karnavaly.
No. 4: Vilnius (Litoania)
Ary tonga tany amin'ny tanàna kely fantatra izahay. Vilna dia ny renivohitra sy tanàna be mponina indrindra any Litoania. Mponina mihoatra ny 554.000 no miara-monina ao amin'ny tanànan'ny tanànany, miaraka amin'ny 838.000 mahery manisa ireo monina any amin'ny faritany.
Vilnius dia tanàna maoderina tena vao haingana. Amin'izao fotoana izao dia ny faritra ara-barotra sy ara-bola novolavolaina ao amin'ny foibeny vaovao, manokana ny faritra avaratry ny reniranon'i Neris, izay maniry ny ho lasa distrika fitantanana sy fandraharahana lehibe eto an-tanàna.
Ny zavatra miavaka amin'ity tanàna ity dia ny hijerenao azy na aiza na aiza no ahitanao azy, dia mahita loko maitso manaitra an'ny zavamaniry be dia be: feno zaridaina, dobo, farihy sns.
Ary noho ny zava-misy mahaliana farany, ny tanànan'i Vilnius dia manana hafainganam-pandeha haingana indrindra any Eropa. Tsy misy na inona na inona!
Toerana # 5: Belfast (Irlandy Avaratra)
Ny teny "Belfast" Midika "Ny fitobiana fasika eo am-bavan'ny ony. Io no renivohitra sy tanàna lehibe indrindra any Irlandy Avaratra, satria misy a mponina misy mponina mihoatra ny 276.000 amin'ny tanànany ary bebe kokoa amin'ny 579.000 ny olona ao amin'ny faritry ny tanànany.
Ny sasany amin'ireo manintona azy dia: ny lapan'ny tanàna Edwardian Belfast; ny Banky Ulster, natsangana tamin'ny 1860; ny University University ary ny Tranombokin'i Linenhall, Victorian sy Ny Efitra Waterfront, trano tsara tarehy misy tsipika maoderina.
No. 6: Hamburg (Alemana)
Farafahakeliny tanàna alemanina iray no tsy ho diso amin'ity lisitra ity ... Nefa aza manahy fa roa hafa no ho avy manaraka.
Hamburg no tanàna faharoa lehibe indrindra aorian'ny Berlin. Manana mponina manodidina ny 2.000.000 ao amin'ny tanànany ary misy olona mihoatra ny 4.000.000 ao amin'ny faritry ny tanànany.
Misy zavatra mahavariana momba an'i Hamburg maritrano, satria izy io dia mirakitra ny endrika maritrano samy hafa. Azonao atao ny mitsidika:
The Theatre Thalia sy ny Kampnagel.
Ny fiangonan'i San Nicolás.
Ny faritry HafenCity.
Ny Hall of the Elbe Philharmonic.
Ary ireo valan-javaboary maro be ao aminy: Stadtpark, Fasan'i Ohlsdorf sy Planten un blomen. ny Stadtpark, "Central Park", sns.
Toerana # 7: Rostock (Alemana)
Tanàna miorina amoron'ny Ranomasina Baltika, eo am-bavan'ny Ony Warnow. Tanàna kely izy satria tsy misy mponina mihoatra ny 250.000 XNUMX.
Misy zavatra manasongadina ny momba ity tanàna alemana ity dia ny mbola fananany ampahany amin'ny rindrina sy ny tilikambo namboarina tamin'ny vanim-potoana medieval.
No. 8: Copenhagen (Danemark)
Tanàna efa antitra izay nanomboka tamin'ny taona 800. Raha miavaka amin'ny zavatra iray i Copenhagen dia malalaka sy karazany ara-kolotsaina (mozika, teatra, opera) ary ao ireo faritra maitso mahafinaritra. Ny valan-javaboary roa lehibe indrindra any Copenhagen dia i Valbyparken sy Fælledparken, fa i Kongens Have koa dia malaza be, eo akaikin'ny Rosenborg Castle any afovoan'i Copenhagen.
Ny sasany aminy toerana mahaliana Izy ireo dia:
Lapan'i Amalienborg, fonenan'ny Royal Royal.
Tivoli, iray amin'ireo voly fialamboly tranainy indrindra eto an-tany.
Nationalmuseet, tranombakoka nasionaly.
Det Kongelige Teater, ilay teatra Royal.
Katedraly San Óscar, fivavahana katolika.
Copenhagen Opera, trano opera maoderina dia nosokafana tamin'ny 2005.
Frederiks Kirke, Fiangonan'i Federico, nantsoina hoe fiangonana marbra.
Kongens Nytorv, ny Plaza del Rey vaovao, miaraka amina sisin-dranomandry amin'ny ririnina.
Na The Little Mermaid of Copenhagen, ankoatry ny maro hafa.
Toerana faha 9: Malaga (Espana)
Ny marina dia afaka mahita tanàna maro manana kalitaom-piainana lehibe isika eto amin'ny firenentsika saingy tsy dia manampy firy ny krizy ankehitriny. Faly foana izahay mahita an'i Malaga amin'ity lisitra ity.
Raha mandeha any Malaga ianao dia tsy tokony tsy hahita:
Katedraly ny fahatongavana ho nofo.
Ny fomba fijery Gibralfaro.
Ny Botanical Garden sy ny tranombakoka Picasso.
Ny teatra romana sy ny tranombakoka fiara.
ny Morontsiraka Malagueta sy Misericordia.
Ny Plaza de la Constitución sy ny ivon-toerany manan-tantara.
Ny ivontoerana kanto ankehitriny sy ny lapa Castle Gibralfaro.
Ny fiangonan'i San Pedro sy ny fo masina.
Plaza de la Merced sy Malaga Park na Alameda.
The Theatre Echegaray sy ny Galeria Goya.
Ny tanànan'i Mijas, Fuengirola, Ronda, Antequera, Júzcar, Marbella ary Frigiliana.
Helodranomasina El Palo, Los Álamos ary Puerto Banús.
Ireo lava-bato ao Nerja.
Toerana faha-10: Munich (Alemana)
Ho an'ny fanadiovana, ho an'ny Toe-karena ary noho ny hetsika kolontsaina sy fety marobe, Munich no laharana faha-10 amin'ity lisitra ity.
Mifanaraka amin'ireo tanàna mandrafitra ny lisitra ve ianao? Malahelo ve ianao? Mihevitra ve ianao fa misy ambiny hafa? Tianay ho fantatra ny hevitrao!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Copenhague » Ireo tanàna 10 any Eropa manana fari-piainana avo lenta
Tsangambaton'ny lova 20 eto Espana (II)
Rahoviana no maimaim-poana ny tranombakoka any New York?